हे भगवान् ! एमालेको रक्षा गर ! – SawalNepal
By सवालनेपाल	 प्रकाशित समय २०७४, १९ पुष बुधबार १५:३८
‘आलोपालो’ को अन्तर्य र एमालेको अन्तरविरोध
त्यसो त चुनावअघि नै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेका शीर्षनेताको कोपभाजनमा पर्न थालेको अनुभूति गरिसकेका थिए । चितवनमा आयोजित चुनावी सभामा प्रचण्डले कांग्रेसलाई धेरै आलोचना नगरिदिन ओलीसमक्ष आग्रह गरे । चुनाव जित्नका लागि कांग्रेसका मतदाता नचिढ्याउने प्रचण्डको चाहना थियो । तर, प्रचण्डलाई सघाउन चितवन पुगेका ओलीले आफ्नो भाषणको अधिकांश समय कांग्रेसको आलोचनामा खर्चिए । यसबाट प्रचण्डको मनमा चिसो पस्यो ।
जस्तै- उदयपुरमा जगन्नाथ खतिवडाले टिकट पाउने ठाउँमा माओवादीलाई दिइएको माधव नेपाल पक्षको गुनासो छ । र, माधव नेपाल पक्षलाई यसैगरी देशैभरिबाट ‘पाँडे पँजनी’ गर्नका लागि केपी ओलीले माओवादीलाई हतियारका रुपमा प्रयोग गरेको गुनासो एमालेभित्र भुसको आगोजस्तै पुत्पुताइरहेको छ ।
अनलाईनखबरबाट साभार गरिएको ।
यि महिला जसले आफ्नो मुटु झोलामा बोकेर हिड्छिन्… (पूरा पढ्नुहोस)
स्तन सानो भयो ठूलो बनाउनु पर्यो भन्दै औषधि पसल पुगेपछि (हेर्नुहोस भिडियो)